तपाईको हातमा पैसा टिक्दैन? अनिवार्य अपनाउनुस यि ४ उपायहरु जसले बनाउने छ करोडपति – Taja Khawar
तपाईको हातमा पैसा टिक्दैन? अनिवार्य अपनाउनुस यि ४ उपायहरु जसले बनाउने छ करोडपति
प्रकाशित मिति: बिहिबार, जेठ २७, २०७८ समय: १८:२१:१२
May 11, 2021AdminLeave A CommentOn तपाईको हातमा पैसा टिक्दैन? अनिवार्य अपनाउनुस यि ४ उपायहरु जसले बनाउने छ करोडपति
धन सम्पतीको जोहो गर्न र यसको बचत गर्न अनेकौं प्रयासका बावजुद सफल भइरहनु भएको छैन ? वा तपाईको हातमा पैसा टिक्दैन ?
यी अनेकौ समस्या भोगिरहनु भएको छ भने तपाईलाई लक्ष्मीको कृपा भएको छैन भन्ने बुझ्न सकिन्छ । लक्ष्मी प्रसन्न भए वा दाहिना भएमा मानिसलाई कहिल्यै धनसम्पति, रुपैयाँ पैसाको अभाव हुँदैन ।
१. महिलाको आदर बिभिन्न शास्त्र र मान्यता अनुसार जुन घरमा महिलाको आदर हुँदैन, उक्त घरमा लक्ष्मकिो कृपा हुँदैन । देवी लक्ष्मी ति घरमा मात्र प्रवेश गर्नुहुन्छ, जहाँ महिलाको सम्मान र आदर हुन्छ ।
३. वास्तु दोष यदि घरमा कुनै वास्तुदोष छ भने पनि उक्त घरमा लक्ष्मीको कृपा हुँदैन । यस्तोमा वास्तुदोष भएका घरमा आएको धन पनि नासिएर वा खर्च भएर जाने हुन्छ । वास्तुशास्त्रमा घरको दिशा कस्तो हुनुपर्छ भनि मार्गदर्शन गरीएको छ ।
जसमा घरका कोठा, भान्सा, शौचालय लगायतका कोठा कुन दिशामा हुनुपर्छ जनाइएको हुन्छ । तसर्थ वास्तु नियम पालन गरी घर निर्माण गरेमा वा निर्माण सम्पन्न भएको घरमा पनि वास्तुको पालना गरेमा लक्ष्मी प्रसन्न भई सुख, संपन्नता र ऐश्वर्य प्राप्ती हुन्छ ।
Last Updated on: June 10th, 2021 at 6:21 pm